Ukumaketha kokuqukethwe kwezakhiwo | Martech Zone
NgoMsombuluko, Okthoba 14, 2013 NgoMsombuluko, Okthoba 14, 2013 U-Adam Encane
Lapho sakha I-Agent Sauce ukuhlanganisa amasayithi, ukuhlanganiswa kwe-IDX, izinkambo, ukuvakasha okungamaselula, ukuvakasha kwamavidiyo, ukumaketha nge-imeyili, ukuthumela imiyalezo nge-SMS nokuphrinta, besazi ukuthi ukumaketha okuqukethwe kuyisihluthulelo sokushayela ukuthengisa okuningi kuma-ejenti. Futhi, akumangazi ukuthi, abasebenzeli bethu abasebenzisa ipulatifomu babona ngokugcwele impendulo enkulu kakhulu namanani asondele.
marketing Okuqukethwe akuyona nje i-buzzword noma isu elithile lokumaketha elingavunyelwe, liyasebenza. Eqinisweni, ukumaketha kokuqukethwe kukhonjisiwe ukuthi kuveza imikhondo ephindwe kathathu kunedola ngalinye njengokucinga okukhokhelwayo. Njengochwepheshe wezezakhiwo, noma kunjalo, ukudala okuqukethwe okuhambisana nezithameli zakho kungaba yinselele. Ngemuva kwakho konke, abathengi bezezakhiwo bayiqembu elihlukahlukene, elihlanganisa iminyaka ehlukahlukene.
Izindawo ithuthukise le infographic ekhuluma ngokuthi ukumaketha kokuqukethwe kunomthelela omkhulu kangakanani embonini yeReal Estate. I-Placester yakha amawebhusayithi we-Responsive Real Estate ahlanganisa imiklamo emihle, ukusingathwa, nokuhlanganiswa kwe-IDX / MLS.
Tags: ukuhlanganiswa kwe-idxinfographici-placeterukuthengisa izindluukumaketha kokuqukethwe kwezindluukumakethwa kwezindluizindawo ezithengisa izindlu
I-Powtoon: Dala amavidiyo we-Animated nezethulo
Okthoba 15, 2013 ngo-4: 57 AM
Okuthunyelwe okuhle! Iyafundisa ngempela .. Ngifunde kakhulu! Siyabonga ngokwabelana!